ukuthi uwusebenzisa kanjani umshini wokugaya irayisi we-paddy
ukuthi uwusebenzisa kanjani umshini we-paddy huller nokuthi yini esidinga ukuyinaka?
Ukusebenza komshini wokugaya irayisi kubaluleke kakhulu kuyo yonke inqubo yokucubungula ilayisi. Manje, ikakhulu masikhulume ngokubaluleka komshini wokugaya irayisi.Umshini wokugaya amaRice ungasusa ukhula we-corn futhi isigaba esiyisisekelo ekugayeni irayisi. I-Rice umbungu nerayisi endosperm ifakwe ungqimba lwegciwane. Futhi ngemuva kokugaya, kungasiza ukwahlukanisa phakathi kombungu welayisi ne-endosperm ukuze kuthuthukiswe ukusebenza kahle kwerayisi yokugaya kahle ukusebenza. Uma sisusa iklabishi yerayisi, singenza isitshalo sokugaya irayisi sikhiqize izigaxa zerayisi ngaphandle kwesiqu, okunambitheka okungcono. Ngaphandle kwalokho, ikhwalithi yesitshalo sokugaya iyathuthuka.
Sithinte Ukuze usebenzise kanjani umshini wokugaya irayisi we-paddy